ओबामा, पुटिन र क्यामरूमको तलब कति ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ३ असार २०७१, मंगलवार १५:३० |
विश्वकै शक्तिशालि देश अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाको तलब कति होला त ? उनले त्यो तलब के मा खर्च गर्छन् त ? ओबामाको वार्षिक तलब चार लाख अमेरीकि डलर हुन्छ अर्थात् उनको प्रति महिना तलब करिब ३१ लाख ५० हजार रूपैयाँ हुन्छ । साथसाथै उनले हरेक वर्ष ५० हजार डलर महंगी भत्ता पनि पाउछन् । ओबामाको जीवनशैलि सामान्य मानिसको जस्तै छ । उनलार्इ बाहिर खाना खान र गल्फ खेल्ने रूचि छ र उनको कमार्इ यी कुरामा खर्च हुन्छ भने मुख्य रूपमा उनकी श्रीमती मिचेल ओबामाको कपडामा हुने गर्दछ ।
त्यसै गरी रूसका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनको तलब प्रति महिना करीब १३ लाख रूपैयाँ हुन्छ । करिब ७० अरब डलरका मालिक पुटिनले आफ्नो रूचिमा दिल खुलाएर खर्च गर्ने गर्दछन् । उनलार्इ घोड सवारी, कुस्ति खेल्न सोख छ भने लक्जरीयस कारहरूमा यात्रा गर्न पनि उत्तिकै मन पराउछन् । उनले आफ्नो बंगलामा एउटा ट्वार्इलेट बनाउन ७५ हजार अमेरीकि डलर खर्च गरेका थिए ।
बेलायति प्रधानमन्त्रि डेविड क्यामरूनको तलब करीब साढे अठार लाख रूपैयाँ छ । उनले करीब १२ लाख रूपैयाँ भत्ता पनि पाउदछन् । क्यामरूनले किताब र म्यागेजिनहरू किन्नमा खुबै पैसा खर्च गर्दछन् भने घुम्न र घर सजावटमा पनि दिल खोलेर खर्च गर्ने गर्दछन् ।
Previousराजेश हमाल अब समाज सेवामा
Nextरजतपट नशा हो, लागेपछि छुटाउन गाह्रो : स्मृति पोख्रेल
दुब्ली देखिने गरि साडी लगाउने सजिलो तरिका
६ श्रावण २०७५, आईतवार ०९:३४
९ आश्विन २०७२, शनिबार ११:१०